नुहाउँदा खेरि के सोच्ने गर्छन् केटीहरू? – rastriyakhabar.com
नुहाउँदा खेरि के सोच्ने गर्छन् केटीहरू?
केटाहरू एक्लै हुँदा अक्सर केटीहरूको बारेमा कल्पना गर्ने गर्दछन् । उनीहरू केटीहरूको व्यवहार र सोचबारे विभिन्न कुराहरूको कल्पना गर्दछन् । तर के केटीहरू पनि एकलाई हुँदा यस्तै खालका कल्पनामा डुब्ने गर्दछन् त र ? आखिर एक्लै हुँदा केटीहरू कस्ता कल्पनामा रमाउने गर्दछन् । व्यवहार अध्ययन गर्ने मनोविदहरूले महिलाहरूका अन्तरंगी विचारहरूबारे गरिएको अध्ययनले रोचक तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । अध्ययनले केटीहरू एक्लै हुँदा उनका मनमा कस्ता विचार आउँछन् र उनीहरूको मनमा केटाहरूको बारेमा या आफ्नो शरीरको बारेमा केकस्ता विचार आउने गर्दछन् भन्नेबारे गरिएको अध्ययनबाट उनीहरूले नुहाउँदा धेरै कल्पना गर्ने भएकाले अक्सर केटीहरूले बाथरूममा समय लगाउने गरेको तथ्य खुल्न आएको छ । उक्त अध्ययनबाट सार्वजनिक केही तथ्य यता रहेका छन :
१.सम्बन्धको चिन्तास :
२.कपालबारे चिन्ता :
केटीहरू आफ्नो कपालबारे पनि चिन्ता गर्ने गर्दछन् । नुहाउँदा केही कपाल झर्नु सामान्य कुरा हो तर केटीहरू भने यसबारे केही बढी नै गम्भीर भइदिने गर्दछन् । त्यति मात्र होइन उनीहरू नुहाउँदा विभिन्न हेयरस्टाइल कस्तो लाग्दो रहेछ भनेर ऐनामा समेत हेर्ने गर्दछन् ।
३.मोटी भएँ किरु भन्ने डर :
४.प्रेमीको बारेमा सोच्नु: